Barnaamijka ugu fiican ee Tababaraha HIIT ee dabacsanaantaada - Habka Makia
Tababar xoogan oo guriga ah ee loogu talagalay socodka iyo dabacsanaanta
Tababar dhaqdhaqaaq waa mid aad muhiim u ah. Waqti ka dib aqoonta ku saabsan faa'iidooyinka tababarka dhaqdhaqaaqa ayaa sii kordhaya. Dhaqdhaqaaqa wanaagsan wuxuu kaa ilaaliyaa dhaawacyada wuxuuna hagaajinayaa caafimaadka guud iyo istaandarkaaga.
Waa maxay tababbarka dhaqdhaqaaqa? Yaa ka faa'iidi kara?
Habka Makia wuxuu ku saabsan yahay Mobility iyo Flexibility. Fududeynta macneheedu waxa weeye inta u dhaxaysa dhaqdhaqaaqa ba'an ee wadajir ah. Mobility macnaheedu waa maareynta iyo xakamaynta dhaqdhaqaaqa kala duwan ee wadajirka. Waxaa jira dad aad u jilicsan, laakiin waxaa laga yaabaa in ay weli ku adkaato in ay si adag u nadiifiyaan miisaanka jirka oo kaliya. Ahaanshaha dabacsanaan iyo dhaqdhaqaaq wanaagsani waa laba waxyaalood oo kala duwan.
Dheefaha Tababarka Socdaalka Qofkasta
Tababarka dhaqdhaqaaqa wuxuu macno ahaan u caawin karaa qof walba. Taas macnaheedu waa in ay haboon tahay in la sameeyo tababarka dhaqdhaqaaqa iyadoo ku saleysan hadafyadaada. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad noqotid sprinter-heer caalami ah, ma ahan wax faa'iido leh si aad u tababar badan. Ciriiri iyo isdabajeyn ballaaran wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhimista murqaha muruqyada. Laakiin sida qayb ka mid ah Habka Makia, awood u yeelashada inuu kala qaybqaato wuxuu si weyn kuu caawinayaa inaad ku guulaysato dhaqdhaqaaqa awoodda.
Isdhex galka iyo Isometric Stretching
Dhab ahaan, sprinter waxaa lagu talinayaa in uu sameeyo wax yar oo dheellitiran oo isku dhafan iyo inuu xoogga saaro inuu sii wato muruqiisa / muruqiisa "furfuran" adoo samaynaya fidinta firfircoon. Iskudhicid aan fiicneyn, iskuduubka isomriitka, iyo isku-dhafka kuwan waa dhammaan siyaabooyin wax ku ool ah oo kor loogu qaadi karo kartida jirka ee shaqaynta. Had iyo jeer ma ahan inay kordhiyaan dhererka muruqyada, lakiin halkii ay badanaaba wax ka beddeli lahaayeen nidaamyada habdhaqanka, falcelinta, iyo hababka xakamaynta.
Iskudheellitirnaanta dabiiciga ah waa xakameyn la xakameynayo dhaqdhaqaaq, e. g. , farsamooyin farsamo-ku-salaysan oo mugdi ku ah miisaanka jirka qofka. Isku xirka Isometric waa fiditaanka ka timaadda shaqada muruqyada, e. g. , markaad istaagtid meel jajaban oo jajaban. Farsamooyinka isku dhafan waxaa ka mid ah habka xiisaha-dejinta iyo xiisadda-dejinta + firfircoonida firfircoon.
Baaxadda dheeraadka ah waa mid dhab ahaan ku dareysa dherer dheeraad ah murqaha. Si kastaba ha ahaatee, muruqyada waa inay ahaadaan kuwo "si fiican u furfuran" si ay u noqdaan kuwo si joogta ah u socda. Murqaha waxaa lagu hayn karaa "furfuran" xitaa markaad sameyneysid tababar xoogan adiga oo sameeya jimicsiyada dhaqdhaqaaqa firfircoon.
Baaxadda joogtada ah micnaheedu waa in la nasto inta aad ku jirto jihada jimicsiga, e. g. , taagan oo horay u socdey. Xaqiiqdii, isku dheelitir la'aanta ah waa in lagu daraa tababbarka markaad rabto inaad ku guulaysato baaxadda dhaqdhaqaaqa.
Khatarta la xiriirta qaas ahaan (30+ sec) fidinta baaxada leh waa in muruqa xajinta muruqyada ay aad u hoos u dhacdo taasina waxay keenaysaa in la yareeyo xakameynta dhaqdhaqaaqa, gaar ahaan meelaha dhibka badan ee dhaqdhaqaaqa. Marka tani dhacdo, halista dhaawaca waxay kordhineysaa labadaba marka fiditaanka iyo ficil kasta oo dhaqdhaqaaqa uu socdo ama laga yaabo in uu tago, udhow dhibcaha daran. Sababtaa awgeed, jimicsi bareer ah waa in lagu daraa jimicsi lagu horumarinayo xakamaynta dhaqdhaqaaqa. Mabda 'Tani waxay kaalin weyn ka qaadataa habka Makia halkaas oo loo baahan yahay dhaqdhaqaaq ballaaran iyo xakameyn dhaqdhaqaaq wanaagsan.
Tababarka Xoojinta ee Ka Qeyb Galaya Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaq buuxa
Mararka qaarkood horumarinta dhaqdhaqaaqa ayaa sidoo kale si weyn u caawin kara tababarka xoogga dhaqdhaqaaq buuxa. Tusaale ahaan, muruqyada infraspinatus ee garbaha ayaa inta badan ku jira xaalad qalafsan oo dhaqdhaqaaqa garabka ah la xaddiday. Marka tani ay tahay, marka muruqyadani ay soo wajahaan xaaladaha kala duwan waxay dareensan yihiin in xaalad aan la xakameyn karin ay sii dhowaanayaan ayna ku dhufanayaan "brakes".
Waa inaad bilowdaa laylisyada dhaqdhaqaaqa si khafiif ah, xitaa haddii ay tahay horumarinta! Marka dadku ay maqlaan ereyga "jimicsi", waxay la xidhiidhaan xanuunka iyo nacaybka.
Hase yeeshee, jimicsiyada dhaqdhaqaaqa waa in aysan keenin xanuunka, mana aha wax xun. Haddii aad ku qasban tahay inaad adigu wax ka qabato, jirkaagu wuxuu helayaa fariin ah khatarta soo foodsaarta, natiijaduna ma fiicna. Markaad sameyneyso isku dheelitir la'aanta, waa inaad isku daydaa inaad xoogga saarto sidii aad u heli lahayd xaalad nasasho leh, iyo marka aad sameyneyso xoojinta xakameynta firfircoonida gaar ahaaneed.
Tababarka Dhaqdhaqaaqa Badan
Habka Mashruuca Makia waxaa ku jira tababarka dhaqdhaqaaqa aad u badan. Dhaqdhaqaaqyo badan, jimicsiga xoogga leh ayaa yeesha naftooda dhaqdhaqaaqa, laakiin tani waxaa lagu sameyn karaa waxtar badan oo ah munaasabadaha dhaqdhaqaaqa kala duwan Source .